Ampidiro ny fampiharana antso sy hafatra maimaim-poana indrindra amin'ny psychedelic ao amin'ny Play Store | Androidsis
Androany aho te-hanolotra vaovao anao fampiharana fampirimana eo noho eo inona no tafiditra fiantsoana feo maimaim-poana, fampiharana avy amin'ireo mpamorona an'i Skype Ary azo antoka fa tsy ho tsy miraharaha anao ianao, na ho amin'ny tsara noho ny endrika mampidi-doza, na ny ratsy kokoa noho ny endrika mampidi-doza resahina.
Antsoina ny fampiharana amin'ny fanontaniana Wire ary ananantsika izany ao amin'ny Play Store ho an'ny Android, maimaim-poana tanteraka, ary ao amin'ny App Store for iOS y oSX mampanantena ny hampiditra tsy ho ela dia kinova an-tranonkala mifanentana amin'ireo mpizaha Internet lehibe.
Araka ny efa nolazaiko anao, Wire Azo ampiasaina ho azy roa Android raha ho an'ny fitaovana paoma toa ny iPhone, iPad o MAC amin'ny alàlan'ny App Store ihany. Ao amin'ilay horonantsary asehoko anao eto ambany, dia nanao a famerenana tanteraka ny fangatahana birao ho an'ny MAC, fampiharana tena kanto sy mahonon-tena izay tsotra ny asany ary mahavariana ihany koa, manome antsika kalitao am-peo tena mahavariana amin'ny antso.
Amin'izao fotoana izao dia tsy mila milaza fa ny fampiharana dia misy zavatra tokony hatsaraina toy ny ny fahaizana mamafa ny resaka iray manontolo, izay na tsy vitako na azo araketiko fotsiny.
Ao amin'ny foto-kevitra haino aman-jery multimedia toy ny fandefasana sary dia asehon'ilay rindrambaiko fampiharana ny fotos alefa amin'ny kalitao avo indrindra ary amina endrika tena hita maso izay miavaka sy miavaka amin'ireo fampiharana hafa amin'ilay fomba, toy ny Telegram amin'ny endriny web na fampiharana azy izay mampiseho anay fotsiny ny topy mason'ireo sary voaray mandra-pikitika azy ireo hahitantsika azy ireo amin'ny habeny feno.
Mikasika ny fisoratana anarana ho an'ny Android, dia fampiharana izay efa nahafenoako fepetra manokana na nataoko batemy ny fampiharana fandefasan-kafatra psychedelic indrindra ho an'ny Android amin'izao fotoana izao. Raha aorian'ny fahitana ny fampiharana tsotra sy mahonon-tena ho an'ny MAC, dia tsy azonao io ekipa mendrika io, manoro hevitra anao aho hijery ity horonantsary ity izay anaovantsika ny fanadihadihana feno momba ny fampiharana ho an'ny Android.
Ahoana ny fahitanao ny fampiharana ho an'ny Android toa tsy dia atahorana loatra, a fomba sary tsy lavorary amin'ny endriny izay mety hitarika ny olona ho tia azy na hankahala azy amin'ny faritra mitovy, na dia tsy maintsy ekena aza fa filokana tena mampidi-doza izy io, ankasitrahana ny fanavaozana sy ny fikasan'ity interface ity, izay miaraka amin'izay mitady zava-baovao sy hafa Natao hiezahana hanao zavatra tsotsotra araka izay azo atao.
Mikasika ny fahombiazan'ity rindranasa ity ho an'ny Android, dia ao anaty olana mitovy amin'ny mahazatra ihany izahay, olana iray izay avy amin'ny traikefa no milaza amintsika fa olona manana fahazarana ny olona, ​​ary na manao ahoana na manao ahoana ny fanoloran-dry zareo fampiharana ho an'ny WhatsApp, azo antoka kokoa, miaraka amin'ny maro hafa Functional, na koa maimaim-poana Ny WhatsApp dia tena lalina amin'ny olona ary lasa fomba fiainana mihoatra ny fampiharana fandefasan-kafatra tsotra fotsiny.
Sintomy ho an'ny iOS sy OSX
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Wire, ny fampiharana fandefasan-kafatra psychedelic indrindra indrindra ao amin'ny Play Store
Sony manokatra Sony Aquatech, fivarotana anaty rano voalohany
Ny toetra mampiavaka ny mpandimby Moto E dia voasivana